Metal mgbidi divider Factory - China Metal mgbidi divider Manufacturers, Suppliers
SL-8014 Laser Cut Nzuzo Ngosipụta igwe anaghị agba nchara Ji achọ igwe ihu igwe Ogige Ndị Dividers cochọ Mma Aluminium Igwe Igwe Nlereanya
A na-emepụta ndị na-ekewa ígwè na ụzọ abụọ dị iche iche. Otu bụ iji metal tube splicing, ndị ọzọ ụzọ bụ iji a metal efere ime laser ọnwụ. Mgbe ị na-ahọrọ metal tube ime, anyị kwesịrị ịtụle maka ọkpụrụkpụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ohere buru ibu ma ọ bụ oghere na-emeghe, ndị na-ekewa ụlọ - nke a makwaara dị ka nkewa ma ọ bụ Shoji - bụ ụzọ mara mma ma dị mfe iji kewaa ma ọ bụ ịmata ọdịiche dị na ngalaba 2 n'ime ohere ahụ ma ọ bụ iji nye ebe dị mma, ebe a na-achọ mma ime ụlọ. N'aka nke ọzọ, enwere ike iji ndị na-ekewa ụlọ nye ebe dịpụrụ adịpụ na oghere ọzọ, mechie ebe enweghị atụ, ma ọ bụ chebe ọkụ mepere emepe. N'ihe niile, ndị na-ekewa ụlọ na-enye ihe ngwọta dị mfe maka ọtụtụ nsogbu ezinụlọ, ha na-elekwa anya
SL-8012 Akwadoro Igwe anaghị agba nchara oge a ụlọ divider / ihuenyo imewe ji achọ nkebi mgbidi.
Anyị agagharịwo gburugburu maka ihe anyị kwenyere na ọ bụ ụfọdụ kachasị mma na ndị na-ekewa ụlọ kachasị mma n'ebe ahụ. Anyị ahụla ndị na-ekewa ọla / ọkụ; Ndị na-ekewa ụlọ ime ụlọ Shōji, ndị na-ekewa ụlọ ime ụlọ ọdịnala, ndị na-ekewa foto maka ime ụlọ foto. Ndepụta anyị ga-enye gị mmụọ nsọ maka ụdị ụlọ ọ bụla.
Laser Cut Nzuzo Skwà igwe anaghị agba nchara Ji Achara Metal mgbidi Dividers ji achọ nkebi
Nke a mgbidi mgbidi divider na-mere site laser ịkpụ na-enwekwa bilie ụkpụrụ, nnọọ keugwu na ihunanya uto. ma ọ bụrụla PVD agba nwere agba ọla edo bilie, ọ ga-abụrịrị otu mpempe ọrụ nka nke ụlọ gị.
Igwe anaghị agba nchara Ime Walllọ Ime Walllọ Mgbasa Mgbawa Mpepụta Ala Mpekere Mbipụta Ime ụlọ Mgbawa Igwe Igwe Igwe Igwe
A na-ekewa mgbidi mgbidi a site na nha dị iche iche nke ọkpọ oghere, wee mechaa elu ya site na nchacha na agba matte, mfe na nkenke.
Na High-ike ịgbado ọkụ technology.
N'aka nke ọzọ, enwere ike iji nkewa ụlọ a nye ebe dịpụrụ adịpụ na oghere ọzọ, mechie ebe enweghị atụ ma ọ bụ chebe oghere mepere emepe. Ọ dị nnọọ mma, ndị na-ekewa ụlọ na-enye ihe ngwọta dị mfe maka ọtụtụ nsogbu ụlọ, yana maka ịchọ mma!
Oge a ngwaahia Ji achọ igwe anaghị agba nchara divider
* Easy gbakọta na mara ọdịdị.
* Ternkpụrụ aghụghọ dị.
* Ezi nghọta, Refractivity na ekweghị ekwe.
Ime ụlọ divider metal ji achọ mma panel panel igwe anaghị agba nchara oge a ejiji ndụ ụlọ ngwá ụlọ ụlọ divider
Nke a mgbidi mgbidi divider spliced ​​site metal ewepụghị akpa, na mgbe ahụ a elu okokụre na agụụ ion plating agba, na-enwekwa geometric ụkpụrụ imewe, nkenke na adabako.
Ọ bụ nnọọ ama na oge a nkecha imewe ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ, ect.
Vetikal Handrail brackets, Nzọụkwụ Aka Aka, Igwe anaghị agba nchara Handrail, Handrails, Igwe anaghị agba nchara Igwe Mbuliaka Handrail, Handrail Base efere,